आफ्नै पद्धतिसहित प्रकृति र सभ्यतातर्फ फर्कौँ । | काव्यालय
सारा ब्रह्माण्डभरि रहेका वनस्पति, पशुपन्छी, जीवजन्तू सँगसँगै मानव जीवन पनि प्रकृतिले दिएकाे अनुपम वरदान सरह नै मानिन्छ । यहाँ प्रकृतिले पनि स्वयं आफ्नाे अस्तित्वलाई यिनै जीवनचक्र चलाउने प्राणी, वनस्पति, जीवजन्तुसँग घनिष्ठ रूपमा जाेडेर चलाइरहेको हुन्छ । जुन कुरालाई अध्यात्मले मात्रै हाेइन् विज्ञानले समेत प्रमाणित गरिसकेको पढ्न, देख्न र व्यवहारमा अनुभव गर्न पाइरहेका पनि छौँ । एकपछि अर्को जीवनचक्र चलाउने हरेक मानवदेखि अन्य प्राणी, वनस्पति सबैले आ-आफ्नाे जीवन अस्तित्व बचाउन र चलाउन प्रकृतिसँग जसरी भएपनि नजिकैको सम्बन्ध राख्नै पर्ने हुन्छ । यदि यहाँ जाे काेही, कसैले पनि प्रकृतिबिना चल्छु, बाँच्छु भन्दछ भने जीवन अस्तित्व सदाका लागि समाप्त भएर जाने निश्चितप्राय नै छ । केही अमानवीय चिन्तन/व्यवहार बाेकेका स्वार्थी मानव जगतका कारणले गर्दा प्रकृति सम्पदा माथि नै दिनप्रतिदिन ह्रास(विनाश) आउँदै छ । अनेकन प्राकृतिक विपत्ति, भौगोलिक प्रकोपहरूबाट सिंगो मनाव जाति, वनस्पति एंव जीवजन्तुलाई अफ्ट्यारो परिस्थितितर्फ धकेलेर तिनका जीवन अस्तित्व नै संकटोन्मुख भइरहेको छ । यस जानकारीबाट मानव जाति अनविज्ञ छैनौँ । हामी सबै मिलेर प्राकृतिक सम्पदालाई माया सँगसँगै संरक्षण गराैँ र प्रकृतिलाई थप हराभरा बनाउन एकताबद्ध बन्नैपर्छ ।
यहाँनेर, वनस्पति, पशुपंक्षी र जीवजन्तुले अझै सम्म पनि आफ्नाे सृष्टिकालमा पाएकाे धर्म, माैलिक दर्शन, मूल्यमान्यता र जीवन पद्धतिलाई निरन्तररूपमा इमानदारीका साथ निभाइरहेकाे/अनुसरण गरिरहेकाे मानव जगतले मज्जाले देख्दै आएको छ । तर सबैभन्दा चेतनशील प्राणी हामी मानव अहिलेको विकासशील र परिवर्तनको ध्वाँसे (नक्कली) आवरणमा अधिकांश मानवले आफ्नाे माैलिक धर्म, दर्शन, मूल्य मान्यता, जीवनपद्धति र संस्कारलाई छाेड्दै गएकाे देख्न सकिन्छ । त्यसै हुनाले नै मानव जीवन चरम संकटमा परिरहेको छ अर्थात् विनाश तिर जाँदैछ । थप पछिल्ला प्रकाशित आंकडाहरुले पनि यही जनाउँछ । हाम्रा अग्रजजनले बचाएर ल्याएका माैलिक धर्म, दर्शन, मूल्य मान्यता, परम्परा र संस्कार छाड्दै जाने र जसरी हुन्छ व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुने गलत प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन झन् धेरै माैलाउँदै गएको पाउँछु । अहिलेका प्रयाजसाे हामी मानवमा मानवता हराएर जाँदैछ । कथित आधुनिकताको नाममा मानवीय दिमागले विकास गरेको कृत्रिम मानव (राेबर्ट) जस्तो रिमाेटले चलाउनु पर्ने चेतनाविहीन भएर दानवतर्फ रुपान्तरण हुँदै गएको यथार्थ हामी सबैले स्वीकार्नुपर्ने स्थिति छँदै छ । अहिलेको आधुनिक समयमा विज्ञान प्रविधिले जतिसुकै प्रगति, उन्नति गरेपनि सजीव प्राणिहरूले प्राकृतिक जीवनशैलीलाई त्यागेर बाँच्न सक्दै सक्दैन ।
संसारका सम्पूर्ण मानव जातीका लागि प्राकृतिक जीवनशैली हरेक हिसाबले फाइदाजनक हुने गर्दछ । त्यसमा अझै पूर्वीय दर्शन र मान्यतालाई जाेडेर चल्ने हाे भने मानव जीवन मूल्यवान हुने सुनिश्चित छ तर यहाँ मानव जातीले प्राकृतिक नियम र मानवीय धर्मलाई ताेडमोड गर्दै गएको हुनाले नै बाँच्नका निम्ति अनेकौं नियम, विधि, कानून, पद्धति र संविधान चाहिएको हाे । हामी मानव बाहेक अरु प्राणी, वनस्पतिका लागि प्राकृतिकाे नियम नै संविधान भन्दा सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ । ती मानव बाहेक अन्य प्राणी र वनस्पति प्राकृतिक नियममा चलिरहेका पनि छन् । सँगसँगै सहजरूपमा कति मज्जाले बाँचिरहेका पनि छन् । प्राकृतिक जीवनशैलीमा मानव जीवन जाेडिए मात्रै मानव जातिकाे अस्तित्व जीवन्त रहिरहने छ । अब हामीले आ-आफ्नाे अमूल्य जीवनलाई प्राकृतिक पद्धतितर्फ फर्कायौँ भन्ने संकल्प गरौँ त्यसबाट सिंगाे मानव जगतलाई नै भलाइ हुन्छ ।
हामी अधिकांश मानव जातिले प्रकृतिक नियमसँगै पूर्वीय दर्शन त्यागेर निरन्तर भाैतिक सुख/सुविधालाई मात्रै सर्वाधिक मूल्यवान मात्र नठानिदिए बाँच्न निकै सहज हुने पक्का थियो । कतै मैले गरेको महसुस, मूल्यांकन पनि सहि भएन कि भनेर अलमल पर्नै पर्याे । यहाँ मानव जीवनकाे सबैभन्दा अमूल्य समय नै यावत व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित भाैतिक सुख, सुविधा आर्जन गर्न केन्द्रीत गर्नाले हामी भित्र भएको वास्तविक मानवता, मानव धर्म विस्तारै विस्तारै स्खलित हुँदै (हराउँदै ,लोप हुँदै) जाँदै छ । त्यसैले, भाैतिक सुखलाई केन्द्र भागमा राख्नाले अन्य सुख, आनन्दका बारेमा पूर्ण रूपमा साँच्चै बेखबर नै छाैँ हाेइन र…?
आधुनिकताका नामले अनावश्यक रुपमा विकास गरेका कथित भाैतिक सुख, सुविधा केही समयका लागि क्षणिक मात्र हुन्छ भन्ने बाेध हृदयकाे सबैभन्दा गहिरो बिन्दुमा हुनै पर्ने रहेछ । सँगै ती कथित सबै भाैतिक सुख, सुविधा नाशवान छन् भनेर पनि मज्जाले बुझ्नु जरुरी ठानेको छु । म पनि बल्लतल्ल थाेरै बुझ्न थालेको छु त्यहीँ भएर यहाँ मनभित्र गुम्सिएका प्रसंगलाई जाेडिन मन लागेको मात्रै हाे । त्यसैले प्रकृतिक नियम र पूर्वीय दर्शनकाे महत्त्वलाई आत्मसाथ गरेर भाैतिक सुखकाे भ्रमबाट बाहिर निस्किन निरन्तर प्रयत्नशील गरिरहेकाे छु । अधिकाशं हामीलाई के लाग्छ भने भाैतिक सुख, सुविधा मात्रै मानव जीवनका लागि मूल्यवान छ भने कथित भ्रममा भ्रमित छाैँ यसको मतलब हामीलाई भाैतिक सुख, सुविधा चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने अर्थ पनि हुँदै हाेइन । यहाँ हामी हरेक मानवलाई भाैतिक सुख, सुविधा पनि चाहिन्छ तर मानवीय धर्म, मूल्य मान्यता नै बिर्सिने विकृति सुख/सुविधाले कता लैजाँदै छ ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । अधिकांश हामी मानवमा यहाँ मानवको भाैतिक शरीर, जीवन मात्र रह्याे स्वयं त्यो भाैतिक शरीर भित्रकाे मानवता/ पद्धति, सहृदयीता क्रमैसँग हराएर अजीव (विलक्षण), स्वार्थी बन्नतर्फ रुपान्तरण हुदै जाँदै छ । जुन राम्रो संकेत हुँदै हाेइन ख्याल गर्नु अति आवश्यक छ । हामीले जीवनकालमा थुप्रै भाैतिक वस्तु/सुख गुमाए पनि मानवतालाई कदापी नगुमायौ बचाइ राखौँ भनेर बुझ्न सके मात्र धेरै सहज हुने थियो ।
हामीले हासिल गरेका हरेक अनुभव, संघर्ष र आनन्द नै जीवन जिउने प्रमुख आधार हुन् । हामी भित्रकाे मानवता जीवित राखी राखौँ । यहाँ हरेक मानवकाे मानवीय धर्म मात्रै हाेस् भन्ने मलाई लाग्छ । अब हामीले आफ्नै माटोलाई सुहाउँदो साेच, विचार, सिद्धान्त र जीवनपद्धति समातौँ । नेपाली र नेपालको हित गर्ने पूर्वीय मान्यतालाई पूर्नजागरण गराैँ । यसले मात्रै हाम्रो हितसँगै राष्ट्रकाे अस्तित्व बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ । नेपालीपनलाई थप जागृति गर्ने मान्यतालाई मात्रै बाेक्ने संकल्प गराैँ । अन्तराष्ट्रिय वैदेशिक सहयोगका नाममा खोलिएका आइएनजिओ र एनजिओ तथा विदेशी नियोगका गलत प्रवृत्ति सदाको लागि बहिष्कार सँगसँगै देश निकाला गरौँ । विदेशीका आयातित वस्तु (अत्यावश्यक बाहेक), संस्कृति, मान्यता, रितिरिवाजलाई सदाका लागि त्यागौँ । अहिले लागू गरिएका आयातित साेच, विचार र सिद्धान्त त्याग्न जरुरी भइसकेको छ । अब हामी नेपालीहरूले आँखामा बाँधिएकाे कालाे पट्टी खाेल्न ढिला भएको आभास हुँदैछ । हामी सम्पूर्ण नेपाली बिउँझे मात्रै सहि मार्गमा देशलाई हिँडाउन सक्ने छौँ । सँगसँगै हामी हाम्रो आफ्नो नेपाली माटोको इतिहास, सभ्यता, संस्कार, धर्म तथा विकासलाई गहन अध्ययन गराैँ । हामी हरेक नेपालीजनमा मानवता भरिएको गहिरो चिन्तन, अध्ययन र चेतना हुनु जरुरी छ । आफ्नै पद्धतिसहित प्रकृति र सभ्यतातर्फ फर्कौँ ।
सबैको जय हाेस्..!
२५ पुस २०७७
१८ अशोज २०७७
१७ अशोज २०७७
म प्रेम लेख्छु
२७ भदौ २०७७
ह्याप्पी बर्थ डे
२४ साउन २०७७